Tokony hataonao ve raha manana fandrakofana ratsy amin'ny Android ao an-trano | Androidsis
Androany, ilaina ny mifandray hatrany. Na dia misy fotoana aza mety manana olana amin'ny finday Android-nay isika amin'ity lafiny ity. Satria mety misy ny tsy fahombiazana amin'ny fandrakofana, indrindra any an-trano dia matetika isika no manana ireo karazana olana ireo. Inona no azontsika atao amin'io lafiny io rehefa mitranga izany? Misy vahaolana maromaro azo atao.
Izany tokoa rehefa manana olana amin'ny fandrakofana amin'ny findainao Android ianao, azonao atao ny manandrana manao ny iray amin'ireto zavatra manaraka ireto. Ho fanampiana lehibe amin'ity lafiny ity ny fanaovana ny telefaona hanana famantarana tsara indray, amin'ny fomba tena tsotra.
1 Atsaharo indray ny telefaona
2 Zahao ireo APN Android
3 Toerana ao an-trano
4 Olan'ny SIM
5 Mifandraisa amin'ny mpandraharaha
Iray amin'ireo lafiny voalohany tokony hisy zahao raha olana amin'ny telefaona io. Noho izany, nanandrana namerina ny telefaona izahay, miaraka amin'ny SIM natsofoka tao aminy tamin'ny fotoana rehetra. Ka rehefa manomboka indray izy dia azo atao ny mifandray amin'ny signal foana ary afaka mampiasa azy isika. Tsara ny manamarina an'ity, raha fantatrao raha tsy fahombiazan'ny telefaona Android na raha misy olana amin'ny fambara ataon'ny mpandraharaha anao. Raha sanatria tsy mandeha tsara dia misy safidy bebe kokoa hatrany.
Maninona no afaka miantso ny XNUMX isika na dia tsy manana fandrakofana aza
Zahao ireo APN Android
Ny olana dia mety amin'ny APN an'ny fitaovana, izay mbola tsy voalamina tsara. Ity dia zavatra azontsika jerena amin'ny fotoana rehetra tsy misy olana loatra. Ho fanampin'izay, manana foana ny lisitry ny APN an'ny mpandraharaha telefaona any Espana. Azontsika atao ny manamboatra azy io amin'ny telefaona rehefa ilaina izany, amin'ny fomba tena tsotra.
Raha rehefa manana isika APN namboarina amin'ny finday avo lenta marina indray, hitantsika fa mbola misy olana momba ny fandrakofana an-tariby, fantatsika fa ny fiandohany dia tsy mitoetra ao amin'izy ireo. Angamba tsy amin'ny telefaona Android ihany koa. Fa ny niandohany dia hafa.
Toerana ao an-trano
Ity dia zavatra efa fantatrao angamba ny ankamaroanao. Misy faritra ao an-trano izay ratsy kokoa ny fandrakofana telefaona. Ka tsara ny manandrana an'io, amin'ny fampiasana angona finday na manao antso an-trano. Azontsika atao ny mahita raha misy fahasamihafana lehibe ao an-trano amin'ny resaka fandrakofana. Satria ity dia zavatra mety hanampy be, indrindra rehefa mandao ny telefaona ao an-trano amin'ny fotoana iray.
Ny zavatra lojika dia ny hoe ny fandraisana dia ho tsara kokoa hatrany amin'ny faritra ivelany. Ka amin'ny lavarangana, terraces ary akaikin'ny varavarankely dia mahazatra fa ho tsara kokoa ny fandrakofana amin'ny fotoana rehetra. Zavatra iray izay manan-danja ihany koa tokony ho raisina. Indrindra amin'ny fotoana manokana izay maha-zava-dehibe ny fisian'ny fandrakofana tsara.
Mety hitoetra ao amin'ny SIM amin'ny telefaona ny olana. Amin'io lafiny io dia zavatra tena tsotra ny manamarina raha olana nipoitra tao amin'ilay SIM voalaza io. Satria ny tokony hataonao dia apetaho amin'ny finday avo lenta. Raha hitantsika fa misy fandrakofana ao amin'ilay telefaona voalaza dia tsy olana amin'ny SIM izany na izany na tsy izany.
Ahoana ny fanovana ny PIN SIM amin'ny Android
Na dia hitantsika aza fa mbola tsy misy ny fandrakofana, dia azo inoana fa misy ifandraisany amin'ity SIM ity ny SIM. Azontsika atao ny mangataka amin'ny mpikirakira anay ho an'ny duplicate amin'ny fotoana rehetra hanazavana ny olana. Noho izany dia tsy zavatra ho marary andoha izany.
Mifandraisa amin'ny mpandraharaha
Farany, Tsara hatrany ny mifanerasera amin'ny mpandraharaha anao raha misy izany. Satria azo atao ny tsy manana fandrakofana amin'ny telefaona Android amin'ny fotoana rehetra ao an-tranonao, na hoe rehefa avy nitady ny niandohan'ny olana ianao dia tsy nahita vahaolana. Noho izany, tsara ny miantso ny mpandraharaha. Mety ho olana aminao io na mety tsy fahombiazan'ny faritra. Ka izany dia hanampy anao hanana angona bebe kokoa amin'ity lafiny ity amin'ny fomba tsotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android cheat » Inona no hatao raha tsy mahazo fandrakofana ao an-trano ny findainao Android
Ny fanombohana ny Razer Phone 3 dia hahemotra hatramin'ny 2020